Zimbabwe bans electric water heaters : The Standard ';
By Reuters | November 14th 2019 at 11:42:54 GMT +0300
Zimbabwe is banning the installation of new electric water heaters in a bid to save power, energy regulations published on Wednesday showed, at a time when the country is enduring rolling blackouts lasting up to 18 hours a day.
The government has previously said electric water heaters consume up to 400 MW of power a day in Zimbabwe where daily production on Wednesday totalled 563 MW, against the demand of 1,200 MW.
SEE ALSO: Zimbabwe minister Shiri, who helped plot Mugabe ouster, dies at 65
In 2015, government officials said there were 300,000 electric heaters installed in Zimbabwe and that 40 per cent of households’ electricity bills went towards water heating.
Zimbabwe Renewable Energy Blackout
Global solar firms reap big as Kenyans take to their goods
Zimbabwe: On the edge again?